နှာစေး နှင့် တုတ်ကွေးတဲ့ ရာသီ (Vocabulary lesson) - Myanmar Network
နှာစေး နှင့် တုတ်ကွေးတဲ့ ရာသီ (Vocabulary lesson)
Posted by Soe Soe Win on August 25, 2014 at 14:03 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီလိုမိုးအေးတဲ့ ကာလရောက်ပြီဆို အအေးမိ နှာစေး၊ တုတ်ကွေးတွေ ဒုနဲ့ဒေး။ ဒီဆောင်းပါးမှာ လူတိုင်း နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးနေကြတော့ အအေးမိ၊ နှာစေး တုတ်ကွေး ဖျားနာတာတွေနှင့် အဲဒါတွေရဲ့ စိတ်ညစ်စရာ လက္ခဏာတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
သင်ဟာ အအေးမိ ဒါမှမဟုတ် တုတ်ကွေးဖြစ်ပြီ ဆိုရင် ဒီလိုပြောလို့ရတယ်။ I am coming/going down withacold/the flu. သင် တုတ်ကွေးကို ဘယ်ကနေ အကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်း ဒီလိုပြောနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ သူငယ်ချင်းနားမှာ တစ်ချိန်လုံး နှာချေလိုက်၊ ချောင်းဆိုးလိုက်လုပ်နေတော့ ... the colleague who sneezed and coughed her way throughameeting with you. အဲဒီတော့ ဒီလောက်များတဲ့ အဟွတ် အဟွတ်တွေ ဟတ်ချိုးတွေကြားမှာ တုတ်ကွေး အကူးမခံရဘဲနေနိုင်ရိုးလား။ It was impossible to escape as there are so many coughs and colds going around. (တစ်ယောက်ကနေ တစ်ယောက်ကူးစက်တယ်ပေါ့။)
တော်တော်လေးအအေးမိပြီး နှာစေးနေတဲ့ လက္ခဏာပြနေပြီဆိုရင် heavy cold ဒါမှမဟုတ် bad cold လို့ ရိုးရိုးခေါ်နိုင်တယ်။ နည်းနည်း ဆန်းဆန်းလေးခေါ်ချင်ရင်တော့ 'a striking cold' ဆိုတဲ့ informal phrase လည်း ရှိသေးတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ သာမန် နှာစေးရုံလေးပါဆိုတာကို ပြောရင် slight cold လို့ပြောတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရင် 'justasniffle' ပဲပေါ့။
အအေးမိပြီး ချောင်းဆိုးတဲ့ လက္ခဏာကိုရော? တစ်အုံးအုံးနဲ့ ချောင်းဆိုးတာ (loud and rough cough) ကို 'a hacking cough' လို့ ခေါ်တယ်။ ရင်ခေါင်းထဲက လာတဲ့ ချောင်းခြောက်ကို 'chesty cough' လို့ပြောတယ်။ တစ်ဆက်တည်း (နည်းနည်းတော့ရွံစရာပေါ့) ချွဲတွေ၊ သလိပ်တွေ ပါအောင်ဆိုးတဲ့ ချောင်းကိုတော့ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးပုလင်းတွေပေါ်မှာ 'productive' လို့ ဖော်ပြလေ့ရှိတယ်။ အခြားလက္ခဏာတွေလည်း ကျန်သေးတယ်။ အအေးမိနေတဲ့ သူဟာ ဆက်တိုက်နှာတွေချေလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါ ချောင်းဆိုးချင်လောက်အောင် လည်ချောင်းနာတာ (sore throat)၊ လည်ချောင်းခြောက်တာ (dry throat)၊ လည်ချောင်းယားတာ (a tickle in the throat) စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။
တစ်ဆက်တည်း နှာစေးပြီး နှာပိတ် (block nose) ဖြစ်ပြီး နှာခေါင်းနဲ့ အသက်ရူရတာ အဆင်လုံးဝမပြေတော့ဘူး။ အဲဒီလိုဖြစ်တာကို ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဝေါဟာရနဲ့ ပြောရင် congestion (noun) ၊ congested (adj) လို့ သုံးတယ်။ conjested ကို British English မှာ ခေတ်ပေါ်စကားလုံးနဲ့ပြောရင် bunged-up လို့ ပြောကြတယ်။
တစ်ချို့ အအေးမိသူတွေဟာ နှာခေါင်းမပိတ်ဘဲ နှာရည်တရွှဲရွှဲ (runny nose) ဖြစ်တတ်တယ်။ အဲဒီလို စိတ်ညစ်စရာ အအေးမိတဲ့ လက္ခဏာရှိသူတွေကတော့ အဲဒါကို streaming cold လို့ ခေါ်ကြတယ်။ အဲဒါဖြစ်လို့ကတော့ လက်ကိုင်ပဝါ တစ်ထည် ဒါမှမဟုတ် တစ်ရှူးတွေနဲ့ နှာမှုတ် (blow your nose) ပြီး နှာရည်သုတ်ပေတော့ဘဲ။
နှာစေး အအေးမိတာတောင် ဒီလောက်ခံရရင် တုတ်ကွေးဆိုရင်တော့ ပြောမနေနဲ့တော့။ တုတ်ကွေးမိပြီဆိုရင်တော့ အိပ်ယာထဲက မထနိုင်လောက်အောင် ကွေးနေပေတော့။ Someone withadose of orabout of flu will probably be laid up in bed. နောက်ပြီး ကိုယ်အပူချိန်တက်ပြီး ဖျားနာမယ်။ (haveafever/temperature) အဖျားကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ 'You are burning up." လို့ပြောတယ်။ ပြီးတော့ ခံတွင်းလည်း ပျက်မယ်။ (be off your food (not at all hungry))
အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင် အအေးမိတာ၊ နှာစေးချောင်းဆိုး တုတ်ကွေးဖျားနာတာတွေဟာ နာတာရှည်ရောဂါတွေ မဟုတ်လို့ တော်တော့တယ်။ အဆိုးရွားဆုံး လက္ခဏာတွေ ဝေဒနာတွေ ကျော်ဖြတ်ပြီး နေပြန်ကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ 'You are over the worst of it.' ပေါ့။ ကဲ...ဒီမိုးတွင်းမှာတော့ နှာစေး ချောင်းဆိုး တုတ်ကွေးတွေကို ရှောင်ရှားရင်း ဒေါင်ဒေါင်မြည် ကျန်းမာကြစေဖို့ ဆုတောင်းရင်း.. ဒီမှာပဲ တော်လိုက်ရအောင်။
Dictionaryblog.cambridge.org မှ Kate Woodford ၏ Season of colds and flu ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Pass!/Take it from me/I'll ...
ဒီလိုမိုးအေးတဲ့ ကာလရောကျပွီဆို အအေးမိ နှာစေး၊ တုတျကှေးတှေ ဒုနဲ့ဒေး။ ဒီဆောငျးပါးမှာ လူတိုငျး နှာခြေ၊ ခြောငျးဆိုးနကွေတော့ အအေးမိ၊ နှာစေး တုတျကှေး ဖြားနာတာတှနှေငျ့ အဲဒါတှရေဲ့ စိတျညဈစရာ လက်ခဏာတှနေဲ့ဆိုငျတဲ့ စကားလုံးတှကေို လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ။
သငျဟာ အအေးမိ ဒါမှမဟုတျ တုတျကှေးဖွဈပွီ ဆိုရငျ ဒီလိုပွောလို့ရတယျ။ I am coming/going down withacold/the flu. သငျ တုတျကှေးကို ဘယျကနေ အကူးစကျခံခဲ့ရတယျဆိုတာကိုလညျး ဒီလိုပွောနိုငျပါတယျ။ ကိုယျ့လုပျဖျောကိုငျဖကျ၊ သူငယျခငျြးနားမှာ တဈခြိနျလုံး နှာခလြေိုကျ၊ ခြောငျးဆိုးလိုကျလုပျနတေော့ ... the colleague who sneezed and coughed her way throughameeting with you. အဲဒီတော့ ဒီလောကျမြားတဲ့ အဟှတျ အဟှတျတှေ ဟတျခြိုးတှကွေားမှာ တုတျကှေး အကူးမခံရဘဲနနေိုငျရိုးလား။ It was impossible to escape as there are so many coughs and colds going around. (တဈယောကျကနေ တဈယောကျကူးစကျတယျပေါ့။)
တျောတျောလေးအအေးမိပွီး နှာစေးနတေဲ့ လက်ခဏာပွနပွေီဆိုရငျ heavy cold ဒါမှမဟုတျ bad cold လို့ ရိုးရိုးချေါနိုငျတယျ။ နညျးနညျး ဆနျးဆနျးလေးချေါခငျြရငျတော့ 'a striking cold' ဆိုတဲ့ informal phrase လညျး ရှိသေးတယျ။ ဆနျ့ကငျြဘကျဖွဈတဲ့ သာမနျ နှာစေးရုံလေးပါဆိုတာကို ပွောရငျ slight cold လို့ပွောတယျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ ပွောရငျ 'justasniffle' ပဲပေါ့။
အအေးမိပွီး ခြောငျးဆိုးတဲ့ လက်ခဏာကိုရော? တဈအုံးအုံးနဲ့ ခြောငျးဆိုးတာ (loud and rough cough) ကို 'a hacking cough' လို့ ချေါတယျ။ ရငျခေါငျးထဲက လာတဲ့ ခြောငျးခွောကျကို 'chesty cough' လို့ပွောတယျ။ တဈဆကျတညျး (နညျးနညျးတော့ရှံစရာပေါ့) ခြှဲတှေ၊ သလိပျတှေ ပါအောငျဆိုးတဲ့ ခြောငျးကိုတော့ ခြောငျးဆိုးပြောကျဆေးပုလငျးတှပေျေါမှာ 'productive' လို့ ဖျောပွလရှေိ့တယျ။ အခွားလက်ခဏာတှလေညျး ကနျြသေးတယျ။ အအေးမိနတေဲ့ သူဟာ ဆကျတိုကျနှာတှခေလြေိမျ့မယျ။ အဲဒီအခါ ခြောငျးဆိုးခငျြလောကျအောငျ လညျခြောငျးနာတာ (sore throat)၊ လညျခြောငျးခွောကျတာ (dry throat)၊ လညျခြောငျးယားတာ (a tickle in the throat) စတဲ့ လက်ခဏာတှေ ဖွဈတတျတယျ။
တဈဆကျတညျး နှာစေးပွီး နှာပိတျ (block nose) ဖွဈပွီး နှာခေါငျးနဲ့ အသကျရူရတာ အဆငျလုံးဝမပွတေော့ဘူး။ အဲဒီလိုဖွဈတာကို ဆေးပညာဆိုငျရာ ဝေါဟာရနဲ့ ပွောရငျ congestion (noun) ၊ congested (adj) လို့ သုံးတယျ။ conjested ကို British English မှာ ခတျေပျေါစကားလုံးနဲ့ပွောရငျ bunged-up လို့ ပွောကွတယျ။
တဈခြို့ အအေးမိသူတှဟော နှာခေါငျးမပိတျဘဲ နှာရညျတရှဲရှဲ (runny nose) ဖွဈတတျတယျ။ အဲဒီလို စိတျညဈစရာ အအေးမိတဲ့ လက်ခဏာရှိသူတှကေတော့ အဲဒါကို streaming cold လို့ ချေါကွတယျ။ အဲဒါဖွဈလို့ကတော့ လကျကိုငျပဝါ တဈထညျ ဒါမှမဟုတျ တဈရှူးတှနေဲ့ နှာမှုတျ (blow your nose) ပွီး နှာရညျသုတျပတေော့ဘဲ။
နှာစေး အအေးမိတာတောငျ ဒီလောကျခံရရငျ တုတျကှေးဆိုရငျတော့ ပွောမနနေဲ့တော့။ တုတျကှေးမိပွီဆိုရငျတော့ အိပျယာထဲက မထနိုငျလောကျအောငျ ကှေးနပေတေော့။ Someone withadose of orabout of flu will probably be laid up in bed. နောကျပွီး ကိုယျအပူခြိနျတကျပွီး ဖြားနာမယျ။ (haveafever/temperature) အဖြားကွီးမယျဆိုရငျတော့ 'You are burning up." လို့ပွောတယျ။ ပွီးတော့ ခံတှငျးလညျး ပကျြမယျ။ (be off your food (not at all hungry))
အဆုံးသတျအနနေဲ့ပွောရရငျ အအေးမိတာ၊ နှာစေးခြောငျးဆိုး တုတျကှေးဖြားနာတာတှဟော နာတာရှညျရောဂါတှေ မဟုတျလို့ တျောတော့တယျ။ အဆိုးရှားဆုံး လက်ခဏာတှေ ဝဒေနာတှေ ကြျောဖွတျပွီး နပွေနျကောငျးလာပွီဆိုရငျတော့ 'You are over the worst of it.' ပေါ့။ ကဲ...ဒီမိုးတှငျးမှာတော့ နှာစေး ခြောငျးဆိုး တုတျကှေးတှကေို ရှောငျရှားရငျး ဒေါငျဒေါငျမွညျ ကနျြးမာကွစဖေို့ ဆုတောငျးရငျး.. ဒီမှာပဲ တျောလိုကျရအောငျ။
Dictionaryblog.cambridge.org မှ Kate Woodford ၏ Season of colds and flu ကို ကိုးကားဘာသာပွနျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
Permalink Reply by thuranewin on September 3, 2014 at 15:21
Permalink Reply by Mon Mon on September 11, 2015 at 11:49